Waxaan ku faraxsanahay inaan xafiiskayaga la wadaagno oo aan rabno in aan bixino adeegga ugu fiican. Si loo caawiyo si loo hubiyo in kulankaagu si haboon u socdo, fadlan raac saddexda talaabo.
Talaabada 1aad: Dib u eeg qaybta guud ee bogga Bogga Meelaha Kulanka, oo fiiro gaar ah u leh qolka kulankaaga lagu qaban doono.
Talaabada 2aad: Buuxi Warqada Xisaabinta Shirarka oo u dir Kulanka, Dhacdada, iyo Kaaliyaha Maamulka sida ugu dhaqsaha badan.
Tallaabada 3: Ka hubso Kulanka, Dhacdada, iyo Kaaliyaha Maamulaha ugu yaraan maalmo yar kahor kulankaaga oo aad bixiso a liiska dadka ka soo qaybgalay ilaa soo dhaweynta.
Saxiixa & Calaamadee
Waxaanu ku siin karnaa calaamad ku saabsan guddida dabagalka afraad. Fadlan tilmaan waxa aad jeclaan lahayd calaamadda si aad u akhrido Warqada Xisaabinta Shirarka.
Dhammaan marti-geliyeyaasha Hay'adda Hawl-galka waxay ku saxiixan yihiin miiska hore waxayna xiranayaan martida booqashada inta ay halkaan joogaan. Wixii kulamo leh in ka badan 10 kaqeybgale, fadlan dhiib soo dhaweynta a liiska dadka ka soo qaybgalay si ay uga caawiso in ay dardargeliso nidaamka jeegga.
McKnight waxay siin kartaa qaxwada, shaaha, biyaha, casiirka, iyo cabitaanka fudud. Fadlan tilmaan xulashadaada Warqada Xisaabinta Shirarka.
Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad dalbato raashin laga soo iibsado iibiyahaaga. Waxaad sidoo kale arki kartaa a Liiska Catererska La Yidhaahdo. Haddii cuntadaada la keeno, fadlan nala soo socodsii magaca cateriga ah iyo wakhtigee ay iman doonto Warqada Xisaabinta Shirarka.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad u adeegto cabitaanka khamriga ee kulankaaga, waa inaad kala hadashaa qorshahaaga Kulanka, Dhacdada, iyo Kaaliyaha Maamulka sida ugu dhakhsaha badan ka hor shirkaaga. Waxaan ubaahanahay in aad buuxiso foomka Ogolaanshaha iyo Magdhawga.
Sawirada iyo daabacaadda
Waxaan ku weydiineynaa inaad fadlan la imaato kulankiina dhamaan qalabka lagama maarmaanka ah oo loo diyaariyey lana nuqulo.
Xaalad dhif ah oo ah xafiis aan la fileyn oo xiran sababtoo ah baraf ama cimilo kale oo halis ah, Kulanka, Dhacdada, iyo Kaaliyaha Maamulka ayaa kuu sheegi doona.
Nidaamka Degdega ah
Xaaladda dabka, cimilada daran, ama xaaladaha kale ee degdega ah inta lagu guda jiro kulan, ka qaybgalayaasha waxaa lagu barayaa inay ka baxaan kormeerka miiska McKnight. Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri hay'adda Qorshe hawleed oo deg deg ah.